को हुन टिकटकमा भा,इ,रल ट्राफिक दाइ ? जुन बने रातारात भा,इरल (हेर्नुस् भिडियो):: Mero Desh
को हुन टिकटकमा भा,इ,रल ट्राफिक दाइ ? जुन बने रातारात भा,इरल (हेर्नुस् भिडियो)
Published on: २२ आश्विन २०७८, शुक्रबार १०:४१
विगत केही वर्षअघि देखि निकै नै नेपालीहरु बिच सामाजिक संजाल टि,कटक निकै नै लोकप्रिय छ । यहांं सबै मानिसहरुले आफ्नो प्रतिभा पस्कने गरेका छन् । कति मानिसहरु यहाबाट निकै नै भाइरल बनेका छन ।
त्यस्तै कयौ म्युजिक भिडियोहरु पनि यहि टिक टकबाट नै भाइरल हुने गरेका छन ।त्यस्तै अहि ले पछिल्लो सम,यमा एकजना ट्रा,फिक प्रहरी पनि उत्तिकै भाइ,रल भए,का छन । प्रायगरी प्रहरी कै वर्दीमा टिकटक भिडियो बनाउने यी ट्राफिक प्रहरीलाई टिकटकमा निकै नि रु,चाए का छन ।
रन्जित आले नाम गरेका यी टिकटकर भनौ या ट्राफिक प्रहरी का भिडियोहरु निकै नै लोकपि्रय रहेका छन । उनको भिडियो हरुलाई टिकटकमा दशौँ लाख भन्दा बढी पटक हेरिन्छन । त्य स्तै उनका भिडियोमा ला,इक पनि हजारौं आउने गरेका छन ।
त्यस्तै उनका भिडियोहरु पनि हजारौंले सेयर समेत गर्ने गरेका छन । अब हेरौ उनै भा,इ,रल ट्राफिक दाइका रमाइला टिकटक भिडियोहरु:
यो पनि,,दिनको ३ भारी घाँस का,ट्ने ९० वर्षकी एक्ली आमाको कथा,घरभित्रै बाघ छिर्छ(भिडियो हेर्नुहोस्)
बाख्रालाइ घाँस सो,तर भन्दाभन्दै जिन्दगी नै जानु आटिसक्यो आमाको । सुखका दिन कहिले आएन भन्दै दु’ख मान्छिन आमा क’ठै ! ऋणपान गरेर घर,खर्च टा,र्दिरहिछिन आमा, क’ठै आमा १५ हजार ऋ’ण छ भन्दै दु’ख मान्छिन ।
आमाको यो अबस्था देखेर मिडियाकर्मी साथि हरु सहयोगका साथ आएका रहेछन । केही रासनपानी लिएर आएका रहेछन उनी । दशैको लागि कपडा पनि ल्याइदिएका रहेछन उनिहरु ले, आमा एकदमै खुसी भइन उनिहरुको ममता देखेर ।
कामैकाम, काम शिबाय केही छैन उनको जीव नमा । एकैछिन फुर्सद छैन आमालाइ । कस्ती नि’ड’र आमा ! बा,,घ नै घुम्दो रहेछ उन को घर वरिपरि तर पनि अलिकति पनि ड’रा’उ’दि’नन उनी ।
म बाहिरै सुत्छु भन्छिन उनी । दसैखर्च स्वरु,प केही पैसा पनि दिए मिडियाकर्मीले आमालाई । आमाको खुसिको ठेगान नै छैन आज । बाकी हेर्नुस तलको भिडियोमा
यो पनि,,माधव नेपालले मध्य रातमा सुटुक्क बनाए प्रेम आलेलाइ पर्यटन र रामकुमारी झाँक्रीलाई स्वास्थ्यमन्त्री
काठमाडौं, २१ असोज । चार वटा मन्त्रालय सहित सरकारमा जान लागेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले मन्त्रीको नाम टुँगो लगाए को हो । स्थायी कमिटीको म्याण्डेट अनुसार अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले महासचिव वेदुराम भुसालसहित का केही
नेताहरुको छलफलपछि चारै जना मन्त्रीको नाम टुँगो लगाएका हुन् ।नेकपा (एकीकृत समाज वादी) का एक नेताकाअनुसार अध्यक्ष नेपालले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उ,ड्ययन मन्त्राल यमा प्रेम आलेलाई पठाउने भएका छन् ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामा रामकुमारी झाँक्रीलाई र सहरी विकास मन्त्रालयमा विरोध खतिवडालाई पठाउने भएका हुन् । त्यस्तै, श्रम मन्त्रालयमा भने किसान श्रेष्ठ,,लाई पठाउने निश्चित् भएको छ ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट सरकार को नेतृत्व विरोध खतिवडाले गर्ने भएका हुन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भोलि नै मन्त्रि परिषद् विस्तार गर्ने भएका छन् ।
विहान ११ बजे मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिने र नवनियुक्त मन्त्रीहरुको सपथ पनि भोलि नै राखिएको बालुवाटार स्रो तले जनाएको छ ।
उता, माओवादी केन्द्रले भने हिजै मन्त्रीहरुको नाम टुँगो लगाईसकेको छ । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले पनि नाम लगभग टुँगो लगाएको भनिएको छ
मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको भाई‘रल टिकटक भि‘डियो
चर्चित गाएक रबिन लामिछानेले विवाहकै दिन श्रीमतीकै अगाडि टिका सानुलाई जिस्काएपछि, बेहुली लाजले भु’तु’क्कै एस्तो बन्यो माहोल(भिडियो सहित)
गायक रबिन लामिछानेको विवहा ल बधाई दिनुस्।( भिडियो हेर्नुस्)
गायिका प्रविशा अधिकारी बि‘हेमा यसरी रोई’न ( भिडियो सहित)
“अ‘प्रेसनपछि अनिता गंम्भिर अवस्था ( भि‘डियो) सिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरौ।।
महानायक राजेश हमालको स्वरमा पहिलो गित (भिडियो सहित)